Imikhiqizo-2 Ifektri - China Imikhiqizo-2 Abakhiqizi nabahlinzeki
i-ultrasonic viscous slurry slurry yokuxuba i-homogenizer
Ukusetshenziswa okuyinhloko kokusabalalisa kwe-ultrasonic embonini ye-slurry ukuhlakazeka nokucwenga izingxenye ezahlukahlukene ze-ceramic slurry.The amandla wezikhathi ezingama-20 000 ngomzuzwana akhiqizwa ukudlidliza kwe-ultrasonic anganciphisa ubukhulu bezinto ezahlukahlukene zepulp kanye ne-slurry. Ukwehliswa kosayizi kwandisa indawo yokuxhumana phakathi kwezinhlayiya futhi oxhumana naye useduze, okungakhuphula kakhulu ukuqina kwephepha, okungahle kube ne-bleached futhi kuvimbele ama-watermark nokuphuka. I-Ultrasonic ...
Umshini we-3000W we-ultrasonic we-nanoemulsion homogenizer emulsifier
I-Nanoemulsion isetshenziswa kakhulu ezimbonini zamakhemikhali, ezemithi, ezokugcoba, ukudla, imikhiqizo yokunakekelwa kwezempilo, izimboni zokuphrinta nokudaya. I-Ultrasonic emulsification iphula amaconsi oketshezi amabili noma ngaphezulu ngokudlidliza okungama-20000 ngomzuzwana, kubenze bahlangane. Ngasikhathi sinye, ukukhishwa okuqhubekayo kwe-emulsion exubile kwenza izinhlayiya zamaconsi emulsion exubekile zifinyelele ezingeni le-nanometer. Ukucaciswa: IMODEL JH-BL5 JH-BL5L JH-BL10 JH-BL10L JH-BL20 JH -...
China ultrasonic yendwangu udayi homogenizer
Ukusetshenziswa okuyinhloko kwe-homogenizer ye-ultrasonic embonini yendwangu ukusabalalisa kwama-textile dyes. Amagagasi e-Ultrasonic aqhekeza ngokushesha uketshezi, ama-agglomerate futhi ahlanganiswe nokudlidliza okungama-20 000 ngomzuzwana, ngaleyo ndlela kwakheke ukusabalalisa okufanayo kudayi. Ngasikhathi sinye, izinhlayiya ezincane zisiza udayi ukuba angene ezimbotsheni ze-fiber zendwangu ukufeza umbala osheshayo. Amandla wombala nokushesha kombala nakho kuthuthukiswe kakhulu. Ukucaciswa: IMODEL JH1500W-20 ...
Umshini we-ultrasonic paper pulp dispersion
Ukusetshenziswa okuyinhloko kokusabalalisa kwe-ultrasonic embonini yamaphepha ukusabalalisa nokucwenga izingxenye ezahlukahlukene zepulpiti lephepha.Umandla wezikhathi ezingama-20 000 ngomzuzwana owenziwe yi-vibration ye-ultrasonic unganciphisa ubukhulu bezinto ezahlukahlukene zepulp. Ukwehliswa kosayizi kwandisa indawo yokuxhumana phakathi kwezinhlayiya futhi oxhumana naye useduze, okungakhuphula kakhulu ukuqina kwephepha, okungahle kube ne-bleached futhi kuvimbele ama-watermark nokuphuka. Ukucaciswa: ADVANTA ...
20Khz umshini wokusabalalisa we-carbon nanotube we-ultrasonic
AmaCarbonnanotubes aqinile futhi aguquguqukayo kepha ahlangana kakhulu. Kunzima ukusabalalisa oketshezi, njengamanzi, i-ethanol, uwoyela, i-polymer noma i-epoxy resin. I-Ultrasound iyindlela ephumelelayo yokuthola i-discrete - eyodwa-ehlakazekile - i-carbonnanotubes. AmaCarbonnanotubes (CNT) asetshenziswa kokunamathelayo, ukumbozwa kanye nama-polymers futhi njengezigcwalisi ezisebenza ngogesi kuplastikhi ukusabalalisa izindleko ezimile ezintweni zikagesi nakumaphaneli womzimba wemoto openda kagesi. Ngokusebenzisa i-nanotu ...
I-20Khz i-ultrasonic pigment enamathela umshini wokusabalalisa upende
Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic kuyinqubo yokulungisa ukunciphisa izinhlayiya ezincane kuketshezi ukuze zibe zincane ngokufanayo futhi zisatshalaliswe ngokulinganayo. Lapho kusetshenziswa imishini ehlakazayo ye-ultrasonic njengama-homogenizers, inhloso ukunciphisa izinhlayiya ezincane kuketshezi ukuthuthukisa ukufana nokuzinza. Lezi zinhlayiya (isigaba sokuhlakazeka) kungaba okuqinile noma uketshezi. Ukwehliswa kobubanzi obusho izinhlayiya kwandisa inani lezinhlayiya ngazinye. Lokhu kuholela ekwehliseni i-aver ...
Isisetshenziswa se-Ultrasonic cosmetic dispersion emulsification
Imishini ye-Ultrasonic ingasetshenziswa kwezimonyo kungokwesizinda, ukusabalalisa kanye ne-emulsification. UKWANDISA: Inzuzo enkulu yokukhipha i-ultrasonic ukusetshenziswa kwe-solvent eluhlaza: amanzi. Uma kuqhathaniswa ne-solvent solitant enamandla esetshenziselwa ukukhishwa kwendabuko, ukukhishwa kwamanzi kunokuphepha okungcono.Ngaso leso sikhathi, i-ultrasound ingaqedela ukukhishwa endaweni ephansi yokushisa, ukuqinisekisa umsebenzi wezinto eziphilayo zezinto ezikhishiwe. Ukuhlakazeka: Amandla aphakeme okushefa akhiqize ...
imishini yokuxuba ye-ultrasonic wax emulsion
I-wax emulsion inokusetshenziswa okuhlukahlukene, ingahlanganiswa nezinye izinto ukwenza ngcono ukusebenza kwezinto. Njengokuthi: i-wax emulsion ingezwa ukupenda ukwenza ukunamathela kopende, i-emulsion ye-wax yengezwa kwizimonyo ukwenza ngcono umphumela ongangeni manzi wezimonyo. . I-micro-jet enamandla eyenziwe ngokudlidliza kwe-ultrasonic ingangena ezinhlayiyeni ukuze ifinyelele esimweni se-nanometer, ...